စီရော်နယ်လ်ဒိုရဲ့ဘ၀မှာ ဖာဂူဆန်က ဥယျာဉ်မှူးကောင်းတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့တယ်
သံယောဇဉ်ဆိုတာက နှစ်တွေဘယ်လောက်ကြာကြာ အမြဲတမ်းဆွတ်ပျံ့နေမယ့် တေးသွားတစ်ခုပါပဲ
24 Oct 2018 . 6:35 PM
သံယောဇဉ်တဲ့။ စကားလုံးကတော့ (၃)လုံးတည်းပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီစကားစုထဲမှာ ခံစားချက်တွေ၊ ကြည်နူးစရာကောင်းတဲ့ စိတ်တွေ အများကြီး ပျော်ဝင်နေတယ်။ စစ်မှန်တဲ့ သံယောဇဉ်တစ်ခု ဖြစ်ပေါ်လာဖို့ဆိုတာ မလွယ်ကူသလို အဲဒီလို ဖြစ်တည်လာတဲ့ သံယောဇဉ်တစ်ခုကလည်း လွယ်လွယ်နဲ့ ဖျက်ဆီးလို့ မရပါဘူး။ အခုလို အစပျိုးနေရတာက နာမည်ကျော် ကစားသမား စီရော်နယ်လ်ဒို Cristiano Ronaldo သူ့ရဲ့ Instagram မှာ တင်ထားတဲ့ Post တစ်ခုကြောင့်ပါပဲ။
သူ့ရဲ့ ဆရာဆိုလည်းဟုတ်၊ ဒုတိယဖခင်လို့လည်း တင်စားလို့ရတဲ့ မန်ယူဂန္ထ၀င်နည်းပြကြီး ဖာဂူဆန် Alex Ferguson နဲ့အတူ ရိုက်ထားတဲ့ ဓာတ်ပုံကို Post တင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ စီရော်နယ်လ်ဒိုက ဒီလိုလည်း ရေးခဲ့ပါသေးတယ်။ “တကယ့် ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ နည်းပြ၊ ထပ်ပြောရရင် မယုံနိုင်လောက်စရာ အရည်အချင်းရှိတဲ့ လူတစ်ယောက်။ ကျွန်တော့်ကို ကွင်းတွင်း၊ ကွင်းပြင်မှာ ဆရာကောင်းတစ်ဦးလို အရာအားလုံး သင်ကြားပေးခဲ့သူ။ အခုလို ကျန်းကျန်းမာမာနဲ့ တွေ့ရတာ တကယ်ဝမ်းသာမိတယ်. Boss ရေ”တဲ့။
ဒီပုံလေးဟာ အသက်မရှိပေမယ့် အဲဒီပုံမှာ ပါဝင်စီးမျောနေတဲ့ ခံစားချက်တွေက သက်ဝင်လှုပ်ရှားလွန်းတယ်။ ဖာဂူဆန်ဆိုတာက စီရော်နယ်လ်ဒိုကို ဒီနေ့ဒီအချိန်အထိ ရောက်အောင် မြေတောင်မြှောက်ပေးခဲ့တဲ့ ဥယျာဉ်မှူးလို့ ဆိုရမယ်။ ဒီပုံကို မြင်လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာ စီရော်နယ်လ်ဒိုနဲ့ ဖာဂူဆန်တို့ မန်ယူအသင်းမှာ ဖြတ်သန်းခဲ့ကြတဲ့ ကာလပုံရိပ်တွေကို စိတ်ထဲမှာ အလိုလိုမြင်ယောင်လာမိတယ်။ ဖာဂူဆန်လက်ထက်မှာ ထင်ရှားကျော်ကြားခဲ့တဲ့ ကစားသမားတွေက မနည်းမနောပါ။
ဒါပေမဲ့ ဖာဂူဆန်ကတော့ သူစိတ်ထဲ သတ်မှတ်ထားတဲ့ World Class Players က (၄)ယောက်ပဲရှိတယ်လို့ သူရဲ့ Leading စာအုပ်ထဲမှာ ၀န်ခံခဲ့ဖူးတယ်။ အဲဒီသူတွေက စီရော်နယ်လ်ဒို Cristiano Ronaldo ၊ ပေါလ်စခိုး Paul Scholes ၊ ရိုင်ယန်ဂစ် Ryan Giggs ၊ ကန်တိုနာ Eric Cantona တို့ပါပဲ။ တစ်ရွာ မပြောင်း သူကောင်းမဖြစ်ဆိုသလို မန်ယူနဲ့ လမ်းခွဲခဲ့ပေမယ့် စီရော်နယ်လ်ဒိုရဲ့ နှလုံးသားတစ်ထောင့်မှာ Red Devil ဆိုတဲ့ အမှတ်တံဆိပ်က အမြဲခတ်နှိပ်ထားပြီးသားပါ။
ဖာဂူဆန်နဲ့ ဆုံတွေ့တိုင်း စီရော်နယ်လ်ဒိုဟာ ကိုယ့်ဆရာ၊ ဖခင်တစ်ဦးလို အားရ၀မ်းသာ ဖက်လှဲတကင်းဖြစ်ခဲ့တာကိုလည်း ပရိသတ်တွေ မြင်တွေ့ပြီးသားပါပဲ။ စီရော်နယ်လ်ဒိုနဲ့ ဖာဂူဆန်တို့ရဲ့ သံယောဇဉ်က နှစ်တွေဘယ်လောက်ကြာကြာ အမြဲတမ်းဆွတ်ပျံ့နေမယ့် တေးသွားတစ်ခုလို့ပဲ ဆိုရမှာဖြစ်ပါတော့တယ် . . .
Photo: Cristiano Ronaldo Instagram,The Sun,Getty Images,SPORTbible
သံယောဇဉျဆိုတာက နှဈတှဘေယျလောကျကွာကွာ အမွဲတမျးဆှတျပြံ့နမေယျ့ တေးသှားတဈခုပါပဲ
သံယောဇဉျတဲ့။ စကားလုံးကတော့ (၃)လုံးတညျးပါပဲ။ ဒါပမေဲ့ အဲဒီစကားစုထဲမှာ ခံစားခကျြတှေ၊ ကွညျနူးစရာကောငျးတဲ့ စိတျတှေ အမြားကွီး ပြျောဝငျနတေယျ။ စဈမှနျတဲ့ သံယောဇဉျတဈခု ဖွဈပျေါလာဖို့ဆိုတာ မလှယျကူသလို အဲဒီလို ဖွဈတညျလာတဲ့ သံယောဇဉျတဈခုကလညျး လှယျလှယျနဲ့ ဖကျြဆီးလို့ မရပါဘူး။ အခုလို အစပြိုးနရေတာက နာမညျကြျော ကစားသမား စီရျောနယျလျဒို Cristiano Ronaldo သူ့ရဲ့ Instagram မှာ တငျထားတဲ့ Post တဈခုကွောငျ့ပါပဲ။
သူ့ရဲ့ ဆရာဆိုလညျးဟုတျ၊ ဒုတိယဖခငျလို့လညျး တငျစားလို့ရတဲ့ မနျယူဂန်ထဝငျနညျးပွကွီး ဖာဂူဆနျ Alex Ferguson နဲ့အတူ ရိုကျထားတဲ့ ဓာတျပုံကို Post တငျခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ စီရျောနယျလျဒိုက ဒီလိုလညျး ရေးခဲ့ပါသေးတယျ။ “တကယျ့ ကွီးကယျြခမျးနားတဲ့ နညျးပွ၊ ထပျပွောရရငျ မယုံနိုငျလောကျစရာ အရညျအခငျြးရှိတဲ့ လူတဈယောကျ။ ကြှနျတေျာ့ကို ကှငျးတှငျး၊ ကှငျးပွငျမှာ ဆရာကောငျးတဈဦးလို အရာအားလုံး သငျကွားပေးခဲ့သူ။ အခုလို ကနျြးကနျြးမာမာနဲ့ တှရေ့တာ တကယျဝမျးသာမိတယျ. Boss ရေ”တဲ့။
ဒီပုံလေးဟာ အသကျမရှိပမေယျ့ အဲဒီပုံမှာ ပါဝငျစီးမြောနတေဲ့ ခံစားခကျြတှကေ သကျဝငျလှုပျရှားလှနျးတယျ။ ဖာဂူဆနျဆိုတာက စီရျောနယျလျဒိုကို ဒီနဒေီ့အခြိနျအထိ ရောကျအောငျ မွတေောငျမွှောကျပေးခဲ့တဲ့ ဥယြာဉျမှူးလို့ ဆိုရမယျ။ ဒီပုံကို မွငျလိုကျရတဲ့အခြိနျမှာ စီရျောနယျလျဒိုနဲ့ ဖာဂူဆနျတို့ မနျယူအသငျးမှာ ဖွတျသနျးခဲ့ကွတဲ့ ကာလပုံရိပျတှကေို စိတျထဲမှာ အလိုလိုမွငျယောငျလာမိတယျ။ ဖာဂူဆနျလကျထကျမှာ ထငျရှားကြျောကွားခဲ့တဲ့ ကစားသမားတှကေ မနညျးမနောပါ။
ဒါပမေဲ့ ဖာဂူဆနျကတော့ သူစိတျထဲ သတျမှတျထားတဲ့ World Class Players က (၄)ယောကျပဲရှိတယျလို့ သူရဲ့ Leading စာအုပျထဲမှာ ဝနျခံခဲ့ဖူးတယျ။ အဲဒီသူတှကေ စီရျောနယျလျဒို Cristiano Ronaldo ၊ ပေါလျစခိုး Paul Scholes ၊ ရိုငျယနျဂဈ Ryan Giggs ၊ ကနျတိုနာ Eric Cantona တို့ပါပဲ။ တဈရှာ မပွောငျး သူကောငျးမဖွဈဆိုသလို မနျယူနဲ့ လမျးခှဲခဲ့ပမေယျ့ စီရျောနယျလျဒိုရဲ့ နှလုံးသားတဈထောငျ့မှာ Red Devil ဆိုတဲ့ အမှတျတံဆိပျက အမွဲခတျနှိပျထားပွီးသားပါ။
ဖာဂူဆနျနဲ့ ဆုံတှတေို့ငျး စီရျောနယျလျဒိုဟာ ကိုယျ့ဆရာ၊ ဖခငျတဈဦးလို အားရဝမျးသာ ဖကျလှဲတကငျးဖွဈခဲ့တာကိုလညျး ပရိသတျတှေ မွငျတှပွေီ့းသားပါပဲ။ စီရျောနယျလျဒိုနဲ့ ဖာဂူဆနျတို့ရဲ့ သံယောဇဉျက နှဈတှဘေယျလောကျကွာကွာ အမွဲတမျးဆှတျပြံ့နမေယျ့ တေးသှားတဈခုလို့ပဲ ဆိုရမှာဖွဈပါတော့တယျ . . .